अन्य उम्मेदवार भन्दा मैले ६० प्रतिशत बढीले नेतृत्व गरिरहेको छु - कृष्ण लामिछाने अन्य उम्मेदवार भन्दा मैले ६० प्रतिशत बढीले नेतृत्व गरिरहेको छु - कृष्ण लामिछाने
अन्य उम्मेदवार भन्दा मैले ६० प्रतिशत बढीले नेतृत्व गरिरहेको छु – कृष्ण लामिछाने
गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए अमेरिकाको आसन्न चुनावलाई मध्यनजर गर्दै उम्मेदवारहरुले चुनावी अभियानलाई तीब्र रुपमा अगाडि बढाइरहेका छन् । त्यस्तै, अमेरिकाको नेतृत्वको लागि आफूलाई बलियो उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत गरिरहनु भएको कृष्ण लामिछाने पनि चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ । उनै लामिछानेसँग निर्वाचनको विषयमा केन्द्रित भएर गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंश ;
त्यस्तैगरि, मैले नेपाली भाषाको एक कक्षा देखी ६ कक्षासम्म पढ्न, लेख्न र बोल्न सक्ने किताब प्रकाशन गरेको छु । उक्त पुस्तक हाल आइसीसीको वेभसाइटमा पनि राखिएको छ । यो भन्दा ठूलो दुरगामी प्रभाव पर्ने काम एनआरएनएको लागि अरु के हुन सक्छ रु आइसीसीले पनि गर्न नसकेको यस्तो काम मैले गरेको छु । आइसीसीले गरेका ठूला प्रोजेक्ट भन्दा पनि ठूलो प्रोजेक्ट हो यो जसले नेपाली भाषा, संस्कृती, धर्म रीतिरिवाज जोड्छ । एनआरएनको मूख्य एजेण्डा र उदेश्य पनि यही हो । अहिले पनि म एनआरएन आइसीसीको भाषा समितिको चियर छु । अहिले फेरि अर्को नैतिक शिक्षा किताब निस्कदैछ जुन ५२ च्याप्टरको नेपाली र अंग्रेजीमा छ । यसको अर्थ हामीले प्रवासमा बस्ने गैर आवासीय नेपालीको लागि र विशेष गरि दोस्रो पुस्तालाई नेपालसँग जोड्ने काम गरेका छौ । अर्थात मोरल एजुकेशनको काम हामीले गरेका छौ ।
अमेरिकाबासी नेपालीहरुलाई मेरो एउटै अपिल छ, तपाईहरुले आजसम्म अमेरिकाको निर्वाचनमा विवाद झै–झगडा, नक्कली मतदाता, नक्कली निर्वाचन परिणाम भनेर जुन कमेन्ट गरिरहनु भएको छ त्यसबाट मुक्त हुनका लागि, सम्पूर्ण रुपमा परिवर्तन गर्नका लागि र तपाईहरुले चाहानु भएको र तपाईहरु सम्पूर्णको साझा उम्मेदवार म हो । एनसीसीमा परिवर्तनका लागि र त्यहाँभित्र भएका बद्मासीहरुलाई बाहिर निकालेर नेपाली समाजको लागि एउटै साझा संस्था र सबैको प्रिय फुलबारी संस्था बनाउनका लागि मलाई तपाईहरुले मतदान गर्नुहोस् र दुई वर्षमा तपाईहरुलाई शिर निहुराउने काम म गर्ने छैन । ठूला कुरा गरेर म यो गर्छु त्यो गर्छु भन्दिन, संस्थाको सदस्य बनौ बनौ लाग्ने वातावरण सिर्जना गर्छु । यहाँभित्र रहेको बेथीतिलाई म व्यवस्थित गर्छु र एनआरएनएलाई साझा संस्था बनाउन म लागिपर्छु । यो नै मेरो मतदाताहरुलाई आब्हान हो । धन्यवाद ।@tesaxnepalnews
गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि बुद्धि सागर सुवेदी नै किन ?
एनआरएन अमेरिकाका Board of Director का उमेदवार विजय ज्ञवाली को हुन्?
अनुप खनालले दिए सचिव उम्मेदवारी
बर्दघाटको चिसापानी अस्पतालबाट पनि कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन सुरु
३ months अघि
सेनाको बन्दुकदेखी कलमको यात्रा – प्रेम सुनार
७ months अघि